Hotmail noma Outlook.com inikeza insiza ye-imeyili ukuze lapho abasebenzisi, okuyi run by Microsoft. Uma unemibuzo efana Indlela Dala i-akhawunti ye-Hotmail then this article will show you the complete process of it. Zikhona izinzuzo eziningi uthola emva ukudala i-akhawunti ye-Hotmail.
Ungakwazi kalula ukubhalisa futhi udale i-akhawunti yakho siqu Hotmail nje kulandela inqubo okukhulunywa ngawo lapha lokhu okuthunyelwe. Thola inqubo ngokuqhafaza igxathu negxathu format Dala i-akhawunti ye-Hotmail. Wena nje kufanele ulandele izinyathelo njengoba kushiwo, ne-akhawunti yakho yakwa-Hotmail izokwakhiwa kalula.
Une ukufunda lesi sihloko ngokucophelela ukwazi inqubo okuphelele ngokwakha i-akhawunti yakwa-Hotmail. Lesi sihloko sinikeza ulwazi lwangempela futhi othembekile mayelana Indlela Dala i-akhawunti ye-Hotmail.
Ingabe uyazi ukuthi Hotmail yizwe lokuqala isevisi yewebhu waqala e 1996? Futhi ngemva konyaka Microsoft ozuza kuyo 1997. Kunokuthi ngemva Microsoft indawo Hotmail ngu Outlook.com e 2013. Hotmail kuyinto eyasungulwa Sabeer Bhatia noJack Smith futhi headquarter salo ku Sunnyvale, California.
Ngemva ukudala i-akhawunti yakho ye-Hotmail ungathola izici eziningi. Hlola Ukukhuluma ngezansi 5 main izici Hotmail.
Bukela Amavidiyo imeyili.
izici Photo Creative.
Awesome izici Junk imeyli.
It kuhlanganiswe Microsoft Office.
Dala i-akhawunti ye-Hotmail | Isinyathelo by Isinyathelo Guide Quick
Manje, sibhekile futhi ulandele ngezansi Ukukhuluma igxathu negxathu Umhlahlandlela ngempumelelo ukudala siqu-akhawunti yakho ye-Hotmail. Wena edingekayo idivayisi internet exhunywe like Computer, I-Laptop, Smartphone ukuze ugcwalise lesi Hotmail Ngena ngemvume Process.
Chofoza esinikeziwe Hotmail olusemthethweni iwebhusayithi isixhumanisi: outlook.live.com/owa
Kuleli khasi, chofoza ku “Dala i-akhawunti khulula” inkinobho.
Manje, kufanele ufake okusha imeyli bese ukhetha domain @ hotmail.com noma @ outlook.com. Ngemva kwalokho cindezela “Olandelayo” inkinobho.
Kulesi sinyathelo, kufanele Dala iphasiwedi, faka esikhaleni esinikeziwe bese ucindezela “Olandelayo” inkinobho.
Manje, ukugcwala ulwazi Igama futhi Isibongo bese ucindezela “Olandelayo”.
Manje, khetha Izwe / Isifunda ningabakaKristu futhi yakho Usuku Lokuzalwa bese ucindezela “Olandelayo”.
Manje, faka izinhlamvu ozibona ukuze siqiniseke ukuthi ungumuntu wangempela ukudala kule akhawunti.
Uma uqedele zonke 7 izinyathelo, ke i-akhawunti yakho izokwakhiwa.
Manje, kufanele ulandele imiyalo ekuskrini ngokucophelela ukungena yakho Ibhokisi lokungenayo Hotmail.
inothi : Yenza iphasiwedi yakho Namandla usebenzisa Ezinkulu, Lowercase, Izinombolo kanye izinhlamvu ezikhethekile ukuvikela i-akhawunti yakho kusukela kubaduni.
Hotmail Imininingwane Yokuxhumana
Hlola Ukukhuluma ngezansi Hotmail Nokunakekela Ikhasimende Izinombolo. Ungashayela noma kunini 24/7 kunoma iyiphi inkinga onayo.
Toll-Mahhala :- 1800 572 1100 /1800 102 1100
Thola imiyalelo efanele lapha mayelana Indlela Dala i-akhawunti ye-Hotmail. Lesi sihloko sihlanganisa inqubo ngokuqhafaza igxathu negxathu nqubo, landela izinyathelo futhi awuqede ukungena kwi-Akhawunti yakho ye-Hotmail. Futhi, hlola ulwazi Imininingwane kunoma yisiphi isicelo.
Nakuba kokuqeda inqubo ukubhekana nanoma iyiphi inkinga bese ubhala amazwana Ukukhuluma ngezansi amazwana ebhokisini, thina sikusize. Futhi hlola website yethu www-hotmail-com.email izibuyekezo njalo.
Filed Under: Bhalisela Tagged With: Dala i-akhawunti ye-Hotmail, Indlela yokwakha Hotmail, Bhalisa Ukuze Hotmail